Cardi B ဆိုတာဘယ်သူလဲ??
On April 10, 2018 April 11, 2018 By fairy
ဒီရက်ပိုင်း Hip-hop အသိုင်းအဝိုင်းမှာ တချိန်လုံးကြားနေရတဲ့ နာမည်တစ်ခုကတော့ Cardi B ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Cardi B album အသစ်ထွက်ပြီတဲ့! Cardi B ဗိုက်ကြီးနေပြီတဲ့ စသဖြင့်ပေါ့လေ။
အဲ့ဒီတော့ တချို့လဲ ဒီ Cardi B ကြီးကဘာကြီးလဲ……ဆိုပြီး သိချင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။
Cardi B ဆိုတာကတော့ အသက် ၂၅ နှစ်ပဲရှိသေးပေမယ့် မီလျံနာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မနေ့ကပဲ အတူနေချစ်သူနဲ့ရထားတဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုထားတဲ့ Rapper တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာအလုပ်တွေစလုပ်တာကတော့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ဖြစ်လို့ ဒီ၂/၃ နှစ်ဆိုတဲ့ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ တရှိန်ထိုး နာမည်ကြီးလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ နာမည်ကျော်ကြားလာတဲ့အပြင် 2017 BET Hip Hop Award မှာ ဆုပေါင်း ၅ခု၊ 60th Grammy Awards မှာ Best Rap Performance နဲ့ Best Rap Song ဆုအတွက် စကာတင်ဆု ၂စုရဘူးသလို iHeartRadio Music Award ၂ခုလဲရဖူးထားတဲ့ Cardi B ဟာခေသူတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
Cardi B လိုမျိုး အချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ နာမည်ကျော်ကြားလာသလို ငွေကြေးအရလဲအောင်မြင်ပြီး မီလျံနာဖြစ်လာတဲ့သူဆိုတာ တော်တော်ရှားပါတယ်။ သူမကတော့အပိုဆုလာဘ်အနေနဲ့ လက်တွဲဖော် (ဝါသနာတူအလုပ်အကိုင်ပါတူတဲ့ rapper Offset
)အပြင် အခုဆိုရင်သွေးလေးကိုပါ ရရှိထားပြီဆိုတော့ အရမ်းကိုကံကောင်းသူလို့ အားလုံးကပြောနေကြတာပါ။
ဒါပေမယ့် Cardi B ကတော့ “လူတွေကငွေတွေဂုဏ်တွေနဲ့ အောင်မြင်နေတာကိုပဲမြင်နေကြတာ ဒီလိုအောင်မြင်လာဖို့အတွက် နေ့စဉ်ရက်ဆက် ကြိုးစားရုန်းကန်လာခဲ့ရတာကိုတော့ မမြင်ကြဘူး” လို့ပြောထားခဲ့ပါတယ်။
2017 ခုနှစ်မှာ Atlantic Records နဲ့စာချုပ်ချုပ်ပြီးနောက် ထွက်ထားခဲ့တဲ့ “Bodak Yellow” ဟာ US Billboard Hot 100 chart မှာ နံပါတ်တစ်စွဲခဲ့ပြီး အမျိုးသမီး Rapper အနေနဲ့ solo တစ်ခုတည်းနဲ့အအောင်မြင်ဆုံးအဖြစ် နံပါတ် ၂ နေရာကိုရခဲ့ပါတယ် ?
Cardi B ဟာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဘာသာရေးကိုကိုင်းရှိုင်းသူတစ်ဦးလဲဖြစ်ပါတယ်။ ထူးဆန်းတာတစ်ခုက သူဟာ Bloods ဂိုဏ်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ ဝန်ခံထားတာပါ။ Bloods ဆိုတာကတော့ အများအားဖြင့် ခိုးဆိုးလုနှိုက်စတဲ့ မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေလုပ်တဲ့ဂိုဏ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တုန်းက အမျိုးမျိုးခက်ခဲပင်ပန်းဆင်းရဲခဲ့ပြီး ငွေရလွယ်တဲ့ အလုပ်မျိုးကိုရွေးချယ်ခဲ့ပေမယ့် သူမအနေနဲ့ ကြိုးစားပြီး ပညာဆက်သင်ဖို့ လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ပညာရေးကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်မသင်ခဲ့ရရှာပါဘူး။ Cardi B ဟာနာမည်မကြီးခင်အနုပညာလောကထဲမရောက်ခင်မှာ ဖော်ချွတ်အကမယ်လုပ်ခဲ့ဖူးပြီး သူ့ရဲ့ vine နဲ့ Instagram တွေကတဆင့် လူသိများလာခဲ့တာပါ။
အရင်ကဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေထက် ခုချိန်မှာတော့ ကြိုးစားမှုရဲ့ ရလဒ်အသီးအပွင့်တွေဖြစ်တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ခံစားနေရပါပြီ။ အဆိုတော်အနေနဲ့သာမကပဲ ဖက်ရှင်မိုဒယ်လ်အနေနဲ့လဲ လုပ်ကိုင်ဖူးပြီး Feminist တစ်ယောက်လို့လဲ ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ Cardi B ဆက်လက်ပြီးတော့လဲ ကြိုးစားနိုင်ပါစေ ပိုပိုပြီးတော့ အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်…..
Music NewsHip-Hop / RapPeople
PREVIOUS POST Previous post: Hollywood ရဲ့ နေရဲမာန်လို့ပြောလို့ရတော့မယ့် Drake ?
NEXT POST Next post: Hacker တွေရဲ့ သွေးတိုးစမ်းခံလိုက်ရတဲ့ Despacito